September 2018 - Ceelhuur Online
September 30, 2018 admin259
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu dhisay xisbiga Midowga Nabadda iyo Dimoqraadiyadda (UPD) oo ah xisbi ay ku mideysan yihiin in ka badan 80 xildhibaan oo labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah, waa xisbiga xilligan heysta aqlabiyadda baarlamaanka federaalka ah, waxaa kale oo xisbiga ku jira siyaasiyiin iyo dad bulshada magac ku leh. Xisbiga Midowga Nabadda […]
September 30, 2018 admin243
Maxkamadda Degmada Dusmareeb ee ururka Ahlu Sunna ayaa maanta xukun sharci darro ah ku riday wariye Maxamed CabdiWali Tooxow, wariyahan ayaa muddo 10 maalmood ah sifo sharci darro ah ugu xirnaa Ururka Ahlu Sunna. Waxaana ay ku eedeeyeen inuu idaacadda kulmiye u diray war uu ku sheegayo in Alshabaab yimaadeen deegaano u dhow Dusmareeb. Wariyaha […]
September 29, 2018 admin262
Wafdi ka socday Golaha Dhalinyarada Qaranka ayaa galabta lagu soo dhaweeyey magaalada Cadaado xarunta Barlamaanka Galmudug. Wafdigan ayaa waxaa hogaaminayey Gudoomiyaha Golaha Dhalinyarada Qaranka Mudane Cabdixaafid Xuseen, wafdigan ayaa safarka dhulka ah uga yimid magaaalada Galkacyo, duleedka Cadaado waxaa kusoo dhaweyey Gudoomiyaha Dalladda dhalinyarada Galmudug GYAN Axmed Maxamed Cumar iyo dhalinyaro farabadan. Masuuliyiintan ayaa muddo […]
September 29, 2018 admin251
Olole nadaafadeed ayaa maanta laga sameeyey gudaha Magaalada Cadaado, gaar ahaa goobaha biya mareenada ah, Ololahaan ayaa waxaa soo abaabulay ururka Dhalinyarada DHISO DALKAAGA, waxaana ka qeyb galay Wasiir, xildhibaano, Maamulka degmada Cadaado, Madaxda Ururada Bulshada iyo dhalinyaro. Dhulkii loogu talagalay in ay maraan biyaha roobku ayaa inta badan waxaa laga dhistay dhismooyin sharci darro […]
September 29, 2018 admin165
Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo dhawaan laga soo daayey xabsiga itoobiya ayaa maalmahan ku sugnaa Magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland, Cabdikariin ayaa maanta gaaray Magaalada Boosaaso Xarunta gobolka Bari halkaas oo si aad ah loogu soo dhaweeyey. Qalbidhagax ayaa safarkiisa waxaa ku wehliya saraakiil sare oo ka tirsan Jabhadda ONLF, waxaana safar dhulka ku mari doonaan […]
September 29, 2018 admin175
Guddiga doorashada Madaxweynaha Galmudug ayaa dib u dhigay doorashada Madaxweynaha. Guddiga ayaa iclaamiyey in 6 October 2018 la qabanayo doorashada, halka markii hore loo balansanaa 30 September. Halkaan ka aqriso jadwalka cusub doorashada.
September 28, 2018 admin344
Waxaa Muddo Todobaad ah ku xiran xabsiga ciidanka Ahlu sunna ee magaalada Dusmareeb caasimadda Galmudug Wariye Maxamed Cabdi wali Tooxow oo u shaqeynayayey Universal TV iyo Radio Kulmiye. Maxamed ayaanan wali lasoo taagin Maxkamad, waxaana suxufiyiin ku booqday xabsiga inoo sheegeen in uu caafimaad qabo, Ciidanka Ahlu Sunna ee gacanta ku haya Dusmareeb ayaa ku […]
September 27, 2018 admin167
Tobankii bishaan dhammaadka ah ee Sibteembar ayey ahayd in Aqalka Sare uu furmo, balse guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare kulan ay qaateen waxa ay ku sheegeen in sababo farsamo uusan Aqalku furmeyn. Warbaahinta Kalfadhi oo ka faaloota arimaha Barlamaanka ayaa baaritaan badan ku sameysay sababta uusan Aqalku u furmin, iyadoo inta badan xildhibaannada Aqalka […]
September 27, 2018 September 27, 2018 admin192
Dabley hubaysan ayaa saaka aroortii Magaalada Muqdisho waxa ay ka gaysteen dil, kadib markii ay beegsadeen wiil dhalinyaro ah. Dilka ayaa wuxuu ka dhacay agagaarka Masaajidka Cabdalla iyo Cawareera oo ku yaallo Degmada Warta Nabadda. Wiilka dilka loo geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Cumar Xasan Cali, sidoo kale Goobta dilka uu ka dhacay ayaa waxa ay […]
September 27, 2018 admin174
Isgoyska Banaadir, Zoobe, Taleex, KM4, Shaqaalaha ee magaalada Muqdisho ayaa saaka xiran, iyadoo gaadiidka ay saaran yihiin dadka shacabka ah aysan isaga kala gudbi karin Isgoysyada magaalada gudaheeda qaarkood. Ciidanka dowladda ayaana ku sugan, sida ay inoo sheegeen dad goobjoogayaal ah. Gaadiidka rayidka ayaa loo diidayaa dhamaan isgoysyadan inay isaga kala gudbaan, kaliya waxaa loo ogol […]